किन हुन्छन्, बलात्कार – My Life Magazine
Home /किन हुन्छन्, बलात्कार
PsychologyJune 7, 2018
किन हुन्छन्, बलात्कार
हिजोआज संसारभरि नै बलात्कारका विभत्स घटनाहरू घटिरहेका छन् । नेपाल पनि यसमा अछूतो छैन । दिनहुु“ रेडियो टीभी तथा पत्रपत्रिकामा बलात्कारका घटनाको खबर सुनिन्छ, देखिन्छ । केही वर्ष यता नाबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारका घटनासमेत देखा पर्न थालेका छन् । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल भारतजस्ता देशमा बलात्कारका अधिकांश घटना समाजमा बेइज्जती हुने डरले स्वयं पीडित र उनका परिवारले लुकाउने गर्छन् । तर बलात्कारका कतिपय घटनाहरू त यति विभत्स हुन्छन् कि सुन्दा पनि आङ जिरिंग हुन्छ, मुटु थर्र काप्छ । त्यसैले, केही प्रश्नहरू उठ्छन्, के हो बलात्कार ? किन हुन्छ, बलात्कार ? के बलात्कार ‘मानसिक रोग’ हो ? कसरी हुन सक्छ बलात्कारको रोकथाम ?
बलात्कार के हो ?
साधारण शब्दमा बलपूर्वक यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नुलाई ‘बलात्कार’ भनिन्छ । जब कुनै पनि व्यक्तिले आवेगमा आएर वा योजनाबद्ध रूपले बलपूर्वक वा लागूपदार्थ खुवाएर विपरीत लिंगीस“ग यौनक्रिया गर्छ भने त्यसलाई बलात्कार (अंग्रेजीमा रैप) भनिन्छ । बलात्कारीले यौनक्रिया गर्नका लागि पीडितलाई हतियारले वा मुक्का तथा खुट्टाले पिट्ने, कुट्ने, घाइते बनाउने तथा मार्ने कार्यसमेत गर्छन् । बलात्कार एउटा कामुक विचलनका साथै कानुनी रूपमा अपराध हो ।
साधारणतया बलात्कार दुई प्रकारका हुन्छन्ः व्यक्तिगत र सामूहिक । कुनै व्यक्तिले डर धाक देखाएर वा बलपूर्वक महिलास“ग यौनक्रिया गर्छ भने त्यसलाई व्यक्तिगत बलात्कार भनिन्छ । यदि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले बलपूर्वक यस्तो कुकृत्र्य गर्छन् भने त्यसलाई सामूहिक बलात्कार भनिन्छ ।
हिजोआज बलात्कार शब्द बढी भद्दा लाग्ने र यसले बलपूर्वक गरिएको यौनक्रियालाई मात्र इंगित गर्ने हुनाले यसको सट्टामा यौन दुव्र्यवहार (सेक्सुअल अब्युस्) शब्द प्रयोग गरिन्छ । तर यौन दुव्र्यवहारको अर्थ अलि फराकिलो छ । यौन दुव्र्यवहार भन्नाले बलात्कारका साथै यौनजन्य अन्य दुव्र्यवहार (जस्तैः कामुक दृष्टिले महिला वा महिलाको कुनै अंग हेर्ने, महिलालाई अश्लिल कुरा गरेर जिस्क्याउने, बलपूर्वक महिलाको स्तन, कम्मर वा कुनै अंग स्पर्श गर्ने तथा चुम्बन गर्ने आदि) लाई समेत जनाउ“छ ।
बलात्कारका घटनाहरू आधुनिक युगका उपज होइनन् । आदि कालदेखि नै बलात्कारका घटना हरेक समाज र संस्कृतिमा घट्दै आएको देखिन्छ । तर प्राचीन समयमा भन्दा आधुनिक कालमा यस्ता घटनाहरू निकै बढ्दै गएका छन् । अतः बलात्कारका घटनाहरू यसरी बढ्नुका पछाडि स्वयं समाज पनि दोषी छ ।
थुप्रै सामाज शास्त्रीहरूले बलात्कारलाई एक जघन्य अपराध मात्र होइन कि एक अस्वस्थ समाज, जहा“ महिलामाथि डर धाक देखाउने तथा महिलालाई अनादर गर्ने गरिन्छ, यो पनि लक्षण हो । अर्को कुरा हाम्रो जस्तो समाजले यस्ता घटनालाई लुकाउन नै ठीक ठान्छ । यसरी बलात्कारका घटनालाई लुकाउने प्रवृत्तिका कारण बलात्कारीको मनोबल बढ्ने गर्छ । सामान्यतयाः कुनै व्यक्ति बलात्कार गर्न त्यस समय उत्तेजित हुन्छ, जब उसमा यौन उत्तेजना धेरै देखिन्छ । तर यौन उत्तेजना मेट्ने साधन प्राप्त हु“दैन । वास्तवमा पुरुषले महिलालाई यौन सन्तुष्टिको साधन मानेका कारण नै बलात्कारको घटना घट्ने गर्छ ।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिमा बलात्कारका अनेक कारण हुन्छन् । मानसिक विचलन, अब्सेसन तथा व्यक्तित्व विकारहरूका कारण पनि मानिसले बलात्कार गर्छन् । हिन्दी फिल्म दिवाना र अग्नि साक्षीमा यस्तै कुरा देखाइएको छ । तीमध्ये पुरुषमा हुने पुरुषत्वको अहं एक प्रमुख कारण हो । यस कुरामा जोड दि“दै महिलावादी लेखिका सुशन ब्राउनमिलरले भनेकी छन्ः बलात्कार कामुकता (लस्ट) का कारणले होइन कि नियन्त्रण र प्रभुत्वको मनोविज्ञानबाट प्रेरित हुन्छ ।
प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रा.डा. डाइना ईएच रसेलले पोर्नोग्राफीका कारणले पनि समाजमा यौन दुव्र्यवहार यसरी बढेको जनाउ“छिन । उनको भनाइ छ कि पोर्नोग्राफी पढ्ने तथा हेर्ने व्यक्ति यौन उत्तेजनामा आउ“छ र उत्तेजना मेट्ने सहज माध्यम पाएन भने समाजिक मर्यादा तथा कानुनलाई समेत नजरअन्दाज गरी बलात्कार गर्न समेत अग्रसर हुन पुग्छ ।
कस्ता हुन्छन् बलात्कारी
प्रायः बलात्कारीको उमेर १६ वर्षदेखि २५ वर्षको हुन्छ । प्रायः बलात्कारीहरू अविवाहित हुन्छन् । तर एक अध्ययनका अनुसार बलात्कारीमध्ये आधा संख्या विवाहित पुरुषहरूको हुने उल्लेख छ । यसैगरी, युवावर्गमा यो प्रवृत्ति बढी देखिए तापनि ४० देखि ५० वर्ष, कतिपय अवस्थामा ६०, ७० वर्षका व्यक्तिमा पनि अनुकूल परिस्थिति हु“दा यस्तो घटना भएको देखिन्छ ।
अधिकांश बलात्कारी निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर भएका हुन्छन् । यिनीहरूको आय, शिक्षा र बुद्धि सामान्यभन्दा कम हुन्छ । बलात्कारीहरू प्रायः समाजविरोधी व्यक्तित्वका धनी हुन्छन् भने कतिपय अपराधी मनोविकृतिद्वारा पनि पीडित हुन्छन् । मद्यपान गर्ने तथा नशालु पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिले पनि बलात्कार गरेको देखिन्छ । कतिपय बलात्कारीहरू बलात्कारद्वारा यौनक्रिया गर्न निकै रमाउ“छन् र यसरी नै बलात्कार गर्दै हि“ड्ने गर्छन् ।
पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि पुरुषमाथि बलात्कार गरेका घटना यदाकदा सुनिन्छ । तर पुरुषले जस्तो गरी महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गर्न सम्भव हु“दैन । कतिपय अवस्थामा महिलाले डरधाक तथा लोभ देखाएर पुरुषलाई, खास गरी किशोरहरूलाई आफूस“ग यौनक्रियामा संलग्न गराएको देखिन्छ । तर बलात्कार गर्नेभन्दा पनि यौन दुव्र्यवहार गर्ने महिलाको संख्या बढी हुने गर्छ । यसका साथै विवाहित पति पत्नी तथा समलिंगीका बीच पनि बलात्कारका घटनाहरू घट्ने गर्छन् । पुरुषले पुरुषलाई पनि बलात्कार गर्न सक्छन् ।
एक असल मानिसले आफूलाई महिलाभन्दा श्रेष्ठ हु“ भन्ने अहं राख्दैन । महिलालाई यौन साधन ठान्दैन । ऊ विवाहित वा
अविवाहित जस्तो भए पनि आफ्नो ऊर्जालाई समाजको विकास र भलाइका लागि सदुपयोग गर्छ
बलात्कृत महिलालाई शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा समेत चोट परेको हुन्छ । यस्ता महिलाहरूले लोकलाज, अपमानित, भ्रम, भयत्रास, तनाव, क्रोध तथा बदलाको अनुभव गर्छन् । यस्ता लक्षणहरू एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि देखा पर्न सक्छन् । तर धेरै बलात्कृत महिला पीटीएसडीको सिकार बन्न पुग्छन् ।
बलात्कारको रोकथाम :
बलात्कार समाजिक तथा कानुनी रूपमा पनि एक जघन्य अपराध हो । त्यसैले संसारभरि नै बढ्दै गएका बलात्कारका घटनाहरू रोकथाम गर्न हरेक देशले कुनै न कुनै उपायहरू अपनाएका छन् । कतिपय देशमा त बलात्कारीलाई निकै कठोर सजाय र मृत्युदण्डसमेत दिने व्यवस्था छ ।
नेपालमा पनि बलात्कारको प्रकृति हेरेर बलात्कारीलाई जेलसजायको दण्ड दिइन्छ भने सामाजिक रूपमा पनि बलात्कारीलाई कुट्ने, पिट्ने तथा यदाकदा सामाजिक रूपमा पनि बहिष्कार गर्ने गरिन्छ ।
हुन त दण्डसजाय बलात्कारको एक मात्र समाधान होइन । तर पनि दण्ड सजायले केही हदसम्म भए पनि बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न सक्षम रहेको देखिन्छ । बलात्कारमा प्रायः पुरुष नै विशेष रूपले अपराधी देखिन्छन् । त्यो किनभने समाजका घटेका अधिकांश बलात्कारका घटना पुरुषद्वारा नै गरिएको देखिन्छ । त्यसैले, यौन दुव्र्यवहारको न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला पुरुषमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसका लागि नागरिक शिक्षा, समाजिक शिक्षा तथा यौन शिक्षा र मनोवैज्ञानिक परामर्श महŒवपूर्ण हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा मनोवैज्ञानिक डा. विलसनको भनाइ उल्लेख गर्न उपयुक्त देखिन्छ । डा. विलसन भन्छन्– एक असल मानिसले आफूलाई महिलाभन्दा श्रेष्ठ हु“ भन्ने अहम् राख्दैन । महिलालाई यौन साधन ठान्दैन । ऊ विवाहित वा अविवाहित जस्तो भए पनि आफ्नो ऊर्जालाई समाजको विकास र भलाइका लागि सदुपयोग गर्छ । एक असल मानिसले बलात्कारको कल्पनासमेत गर्दैन । असल मानिसले अनेक बाहना बनाएर प्रेमका नाउ“मा आफ्नी पत्नी वा केटी साथीलाई समेत बलात्कार गर्दैन । त्यसैले महिलाले पति रोज्दा हरेक रात बलात्कार गर्ने पति होइन, शारीरिक रूपमा आर्कषक तथा बलवान् नभए तापनि एक असल पति रोज्नुपर्छ ।’
हो, डा. विलसनले भनेझैं महिलालाई असल पति वा साथी खोज्न सजिलो छैन । तर महिलाहरूले बलात्कारप्रति सचेत भएर यसबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्ने तथा आफू यौन दुव्र्यवहार र शोषणबाट पीडित भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी गर्ने साहस देखाउने हो भने घरबाहिर होस् वा घरभित्र होस्, बलात्कारका घटनामा धेरै कमी आउने पक्का छ ।
लेखक मनोविद् हुन्
The 12 cognitive biases that…
किन हरेक महिलामा फरक यौन…